MUUQAAL: Wafdigii DF-Soomaliya oo ka hadlay Waxay kala Kulmeen Siciid DENI iyo Safarkii Puntland | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Wafdigii DF-Soomaliya oo ka hadlay Waxay kala Kulmeen Siciid DENI iyo Safarkii Puntland
Oct 9, 2019 - 4 Aragtiyood
Muqdisho ( kalshaale ) Wasiirka Arimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka Warbixiyey Safarkii ay Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ay ku tageen magaalada Boosaaso, Halkaasi oo ay kulan kula yeesheen Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Ninkaan wasiirka arrimaha dibadda, iyo labadda kaleba sidaan horay u sheegay waxeey aheeyd in la raacdeeyo. Maadaama eey ku guuldareeysteen qabiilkooda in eey ka dhaadhiciyaan in eey dowladda dhexe wax kusoo biiriyaan, lacag, amaba askar amaba uGu yaraan iyaga oo ka daaya qaska iyo qalalaasaha. Intaba waa eey ku fashilmeen, sidaas owgeed, waxyaabahaas waxaa lagaari lahaa, hadii laraacdeeyn lahaa nimankaan.
Laakiin, daanyeernimada iyo caqlixumada Somalida ku dhaqanto ayaa keenaya in qof/qabiil aanan wax mucaarad ah maahanee wax kale kusoo kordhin dowladda dhexe, iyo qabiil/qof taageero ciidan u dhinta dowladda dhexe, canshuur iyo ar Farmaajo ii geeya ku haya, isku si loola dhaqmo. Waxa kaliya oo aan ku tilmaami karro dhaqankaas waa daanyeernimo.
Waxaa Deni dhaaftay inuu jeebbeeyo raggan lacagta loo soo dhiibay ka qaato
Maya, ma waxuu u xirri nimankaan tolkiis. Anniga waxaan aaminsanahay in eeyba isaga u shaqeeyaan oo eey warbixin siiyeen.
Majeerteenku waa ka horeeyaa cali baasteenka Hawiyaha iyo Mareexaanka ilkayarta ah, iyo agoonta kale ee kacaanka. Ar Farmaajo ii geeya! lols
3 sano iyagoo danta Puntland wada ama u doodaya ma aanaan arag. Laakiin markii dano isku dir iyo laaluush ah ay wadaan ayay noo yimaadaan.
Ninkan Cawad ah waxaa noogu dambaysey xiligii doorashada inta geedka lagu xiray laga soo deyn jirey marka ay dhammatay.
Ragga kale waaban arkay iyagoo xoogaa hadlaya ama soo booqanaya Puntland